Tiri kushanda nekambani yemumwe wedu mukugadzira nharembozha yeApple neIOS izvozvi. Kunyange isu tamboita edu ega maapplication, ino tsika app iri kuda kumbonyanya kutarisisa kupfuura zvataifungidzira. Ini ndinofunga zviri kutora nguva yakareba kushanda pakushambadzira, kuendesa, uye kutsikisa kweye mobile application kupfuura iyo nguva yekuvandudza app! Isu tinonyatso kugadzirisa tarisiro yebasa rakadai mune ramangwana
Sekutsiva chishandiso, mukaha watakatarisisa (kunze kwekumwe kuverenga kusiri iko) ndewekuti pakanga pasina chekubatana mukushandisa kwefoni pakati pekambani nemushandisi. Saka isu takawedzera nyore kuonana uye tinya-ku-kutaura maficha, pamwe nekukwevera mune yavo Youtube How-To mavhidhiyo uye avo azvino blog mablog. Nekusundira izvo zvinopihwa kumushandisi, iko kunyorera nharembozha ikozvino kunopa yakanyanya kuvandudzwa gedhi rekuvaka kudzoka kuri nani mukudyara uye pamwe kutowana kutengeswa kwakananga kubva mukushandisa.
Kunyangwe iwe wakanangana nekuunganidza vatengi kana vashandi, iyi infographic inovhara zvese mabhesiki: kutsanangudza zvinangwa zvako, kuongorora mutengo, kupa maKPIs, uye kusvika kune iyo ROI kuverenga mune inotonhora, yakaoma nhamba. Enda kupfuura zano nemametric uye equations zvinoratidza kuti kufamba kwebhizinesi zvechokwadi kunowedzera. Jason Evans, SVP, Strategy & Innovation Management
ichi infographic kubva kuKony inofamba inoshambadza kuburikidza neese akasiyana maficha ekuverenga iyo Kudzoka paInvestment yekuvandudza nharembozha uchishandisa NPV (Net Present Value) nzira. Kuti uwane rumwe ruzivo, ita chokwadi chekutora Kony's Whitepaper Kuyera Nhare: Kuenzanisa Kubudirira kweYako Nhare Initiative.
Zvita 10, 2014 na10: 22 PM